Abenzi bemaskhi nabathengisi - China Mask Factory
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513001A
I-Mask ethengisa kakhulu (i-Ugly Mr.) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513001B
I-Mask ethengisa kakhulu (i-Ugly lady) I-Thread Embroidered Diy Embroidery Kit isebenzisa okokulungisa okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513002A
Imaski ethengisa kakhulu (amadoda we-Blue brocade) I-Thread Embroidered Diy Embroidery Kit isebenzisa okokulungisa okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513002B
I-Mask ethengisa kakhulu (i-Blue brocade women) I-Thread Embroidered Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513003
Imaski ethengisa okushisa (i-Flower charm) Intambo efekethisiwe ye-Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513005A
Imaski ethengisa eshisayo (Iphunga elimnyama) I-Thread Embroidered Diy Embroidery Kit isebenzisa okwenziwe ngesandla okwenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale Embroidery Facemask Washable Reusable Embroidery kit 513005B